Bubnovskaya सिम्युलेटर। प्रक्रिया डाक्टर Bubnovskaya प्रयोग व्यायाम
विशेष गरी जो musculoskeletal प्रणाली, डिजाइन Multifunctional सिम्युलेटर Bubnovskaya समस्या छ मान्छे को लागि। यो तपाईं पेशी प्रणाली, एक herniated डिस्क को घटना बलियो फिर्ता दुखाइ को हटाउनु, साथै रोक्न दिन्छ।
डा Bubnovsky जोडहरुको को रोगहरु को उपचार र रोकथाम लागि विशेष विधि विकास, सार जो को मात्र आन्दोलन सक्रियता पीडादायी मांसपेशीमा सामान्य कार्यक्षमता पुनर्स्थापना गर्न सक्षम छ भन्ने छ। Kinezeterapiya प्रभावित क्षेत्रमा दुखाइ विजयी उद्देश्य। कुनै लागूपदार्थ, कुनै इंजेक्शन छैन पूर्णतया हाम्रो शरीर को मांसपेशिहरु मा सामान्य रक्त र लसीका प्रवाह पुनर्स्थापना गर्न सक्षम छन्। Bubnovskaya सिम्युलेटर को मांसपेशी तन्तु गर्न सबै आवश्यक ट्रेस तत्व को वितरण, अक्सिजन पत्र र संयुक्त गतिशीलता पुनर्स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। तथापि, व्यायाम गर्नुपर्छ मात्र आफ्नो डाक्टर संग परामर्श पछि।
सिम्युलेटर Bubnovskaya मा सत्र देखाउन
यो चिकित्सकीय प्रविधी को काँध जोडहरुमा degenerative डिस्क रोग, गठिया, दुखाइ को उपचार को लागि राम्रो अनुकूल छ। साथै, Multifunctional सिम्युलेटर Bubnovskaya साथै गोडा को arthrosis, koksoartroz जस्ता निदान को उपचार मा स्थापित। prostatitis, दुर्बलता र पनि बवासीर पनि प्रशिक्षण पद्धति को urogenital प्रणालीमा विकार देखाइएको छ। यो उपचार पुनर्वास बेला मेरुदण्ड र अन्य आन्तरिक अङ्गहरू, को हस्तान्तरण हृदय आक्रमण र स्ट्रोक मा सर्जरी पछि प्रयोग गरिन्छ, टिप्पण लायक छ। सिम्युलेटर Bubnovskaya scoliosis, अस्थमा, आन्तरिक अङ्गहरूको रोगहरु, बाँझोपन को रोकथाम लागि सिफारिस गरिएको। गर्भवती महिलाका लागि अभ्यास को एक विशेष सेट पनि छ, उद्देश्य जो पछाडि, फुलेको नसाहरु को दुखाइ रोक्न छ।
यो सिम्युलेटर को संस्करण
यो उपकरणको धेरै संस्करणहरु छन्। एकल स्तम्भ (MTB-1) थप दुई परिक्रमा ब्लक (माथि र तल), र एक माथिल्लो, निश्चित छ, जो छ। ब्लक मार्फत बारी मा, सामान एक सेट संलग्न छ जो, केबल बित्दै। आफ्नो स्थिति सुरक्षित वा छोटो र लामो ह्यान्डलहरू अनुमति दुबला। तिनीहरूले ठाडो र तल रेल राखिएका छन्। साथै, दुई खुट्टा र चार (ठाडो) हुन सक्छ। सिम्युलेटर Bubnovskaya MTB-2 दुई रैक र पीठ छ। को भार एजेन्ट कारण विरोधी गुरुत्वाकर्षण को प्रभाव हासिल, को मेरुदण्ड मा दबाव हराइरहेको छ अर्थात्। कारण सिम्युलेटर वजन मा भार को एक किसिम संग सुसज्जित छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, तपाईं व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई लागि हो कि भार चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकाइ पनि मात्र competently अभ्यास को एक सेट चयन भने, सम्पूर्ण जिम प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। तर, समय वा अवसर त्यहाँ जिमहरू भ्रमण गर्न भने, तपाईं फिटनेस उपकरण घर Bubnovskaya लागि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
को सिमुलेटर कति छ
घर परिमार्जन MTB-1 प्ले लागि सबै भन्दा राम्रो अनुकूल छ। मूल्य समावेश छन् भनेर (20-100 किलो) सामान को सेट, र ठाडो फ्रेम को उचाइ मा निर्भर गर्दछ। साथै, थप विधानसभा समावेश हुन सक्छ स्वीडिश पर्खाल। सबै भन्दा राम्रो विकल्प गृह लागि - प्रशिक्षक Bubnovskaya, मूल्य दायरामा 68000-90000 rubles छ। धेरै जिमहरू (र अस्पताल) आफ्नो परिसर अधिक महंगा विकल्प बन्डल। स्वीडिश पर्खाल गर्न संशोधन बारे 170.000 rubles खर्च हुनेछ। अभ्यास को एक व्यापक दायरा तपाईं चार ठाडो समर्थन मा प्रदर्शन गर्न सक्छन्। यस्तो सिम्युलेटर Bubnovskogo (मूल्य बारे 280000 rubles छ) प्राथमिकताको स्वास्थ्य केन्द्र मा सेट गरिएको छ।
एक सिम्युलेटर के अभ्यास गर्न सकिन्छ
यो उपकरण भेद मुख्य अंक - यो एक decompression प्रणाली र antigravity छ। मानव शरीर प्रशिक्षण limbo छ। यस समयमा, मांसपेशिहरु र जोइन्टहरूमा आराम, खंड। लोड धेरै पटक द्वारा कम छ। यो दुखाइ को लापता योगदान पुग्छ। stretching द्वारा पनि vzaimokontakt जोइन्टहरूमा घट्यो। यो उपास्थि धन्यवाद मेटाउन कम सम्भावना छ। सिम्युलेटर Bubnovskaya एकदम विविध मा अभ्यास। दुई हात Employing, तपाईं, यो ग्रीवा मेरुदण्ड को राम्रो मांसपेशीमा बाहिर काम गर्न सक्छन् काँध। तपाईं पनि बाङ्गो वा स्टेप्पर गति खुट्टा प्रदर्शन गर्न सक्छन्। यो पनि मेरुदण्ड बलियो भएको pelvic अंगहरु मा गहन रक्त बढवा दिन्छ। यस्तो व्यायाम, विशेषज्ञहरु विभिन्न gynecological रोगहरु मा सुझाव दिन्छौं। Backaches प्रभावकारी बिभिन्नविचलन (सबै चौका मा)। यो सबै अभ्यास विशुद्ध व्यक्तिगत चयन गरिएका टिप्पण लायक छ। र सुरुमा, प्रत्येक रोगी मुख्य सङ्कुचन क्षेत्र assesses गर्ने एक विशेषज्ञ, एक मेडिकल परीक्षा undergoes। उपचार को एक पूर्ण पाठ्यक्रम3चरणमा (3 महिना को समय) को हुन्छन्। तिनीहरूलाई बीच छोटो ब्रेक (बारेमा एक हप्ता) सिफारिस गरिएको।
सुविधा र लाभ प्रविधी डा Bubnovskaya
Multifunctional Bubnovskaya सिम्युलेटर केही कार्यक्रम छोराछोरी, गर्भवती महिला लागि विशेष डिजाइन, पूर्ण सुरक्षित छ। यस्तो अभ्यास मा ढाड यस्ता हर्निया, भंग रूपमा गंभीर रोगहरु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, unloaded छ। पीडादायी लक्षण मात्र हो किनकी शरीर को आन्तरिक रिजर्व को हटाइएका छन्, लागूऔषधको खर्च मा तर छैन। यो आफ्नो आहार पोषक वृद्धि गर्न तत्व पहिल्याउन जान्छ जो, राम्रो गहिरो फिर्ता मांसपेशिहरु काम गरे। साथै, घर प्रयोगको लागि सिम्युलेटर को अधिग्रहण, त्यहाँ जिम भ्रमण गर्न कुनै आवश्यकता छ। यो वस्तुतः सबै मांसपेशी समूहहरु अध्ययन गर्न मौका दिनुहुन्छ: .. बाइसेप, triceps प्रेस, buttock पुछ्ने, आदि अभ्यास को एक राम्रो-चुनिएको सेट शरीर गरेको मांसपेशीमा लागि मात्र लाभदायी छन्, र हड्डी गर्न रगत प्रवाह बढ्छ। फलस्वरूप, जोइन्टहरूमा आफ्नो पूर्व गतिशीलता पुनः प्राप्त, को tendons र बंधन बलियो बनाउँछ।
के स्ट्रबेरी रूखको गुण? फल बिरुवाहरु को उपयोगी गुणहरू
औषधि "ginseng को ट्रेमर": प्रयोगका लागि निर्देशनहरू
मह संग अद्वितीय viburnum के हो? उपयोगी गुण र रोग बाट परम्परागत व्यञ्जनहरु
आवेदन knotweed: केवल प्रमाणित तथ्य!
Psoriasis सन्टी टार को उपचार: समीक्षा
"यस Sims 4" मा कोड: कौशल
जेम्स ब्रोलिन: जीवनी, चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन
कपडा पर्खाल coverings: सबै नयाँ - यो राम्रो पुरानो भूल छ
मानिसहरूको आँखा मार्फत एक आदर्श महिला को गुणहरू
फिल्म, अभिनेताहरु को भूमिका को इतिहास: "को हीरा शाखा"
बिजुली पोल: वर्गीकरण र सेटिङ कदम
आँखा अन्तर्गत गाढा सर्कल लागि कंसीलर। तिमी किन कंसीलर चाहिन्छ